घरमा सजिलै तरकारी खेती - राम्रो काम - नारी
घरमा सजिलै तरकारी खेती
कुरा बुझेकाहरू केही महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि अर्गानिक तरकारी खरिद गर्छन् ।
भाद्र ८, २०७३हिजोआज बजारमा पाइने तरकारीमा रासायनिक औषधि प्रयोग गरिएको पाइन्छ जुन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । यो कुरा बुझेकाहरू केही महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि अर्गानिक तरकारी खरिद गर्छन् । यद्यपि अलिकति जमिन र परिश्रम गर्ने जाँगर छ भने तरकारीमा खर्च हुने पैसा जोगाउन सकिन्छ । घरवरिपरि सानो ठाउँ, बारी वा कौसीमा सजिलै तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
धेरै मानिसलाई घरमा तरकारी खेती गर्न झन्झटिलो र बढी मेहनतयुक्त काम लाग्छ । त्यसैले उनीहरू आफूसँग भएको ठाउँ त्यत्तिकै खेर फाल्छन् । अलिकति मात्र ध्यान दिने हो भने आफैंले उब्जाएको ताजा तरकारी खान कुनै समस्या हुँदैन । वर्षामा तरकारी खेती गर्न सजिलो पनि छ । वर्षामा बोटबिरुवाका लागि अलग्गै पानीको व्यवस्था गरिरहनु पर्दैन ।
वर्षामा गोलभेंडाका बिरुवा सजिलै उमार्न सकिन्छ । गोलभेंडाको बीउ छर्न सबैभन्दा पहिले माटो तयार गरी क्यारी बनाउने । क्यारीलाई १५ इन्चसम्म अग्लो बनाई गोलभेंडाको बीउ छर्ने वा घरमै पाकेर फुटेका गोलभेंडालाई सुकाएर जमिनमुनि राख्न सकिन्छ । त्यसबाट केही दिनमै गोलभेंडाका बिरुवा देखिन थाल्छन् । गोलभेंडाको बिरुवालाई सहारा दिन लौरो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गोलभेंडाबाट भिटामिन ए, बी, सी, डी, क्याल्सियम तथा आइरन पाइन्छ ।
गोलभेंडामा छिट्टै कीरा लाग्छ । त्यसैले समय–समयमा बेसार र खरानी मिसाएर बोटमा छर्किनुपर्छ ।
रामतोरियाका लागि माटो मिसाई क्यारी तयार गर्ने । रामतोरियाको बीउ वा बिरुवा रोप्न सकिन्छ । क्यारीमा रोप्दा रामतोरियाको जरामा पानी पुग्न पाउँदैन र रामतोरियाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । एउटा बिरुवादेखि अर्काे बिरुवाबीचको दूरी १५ देखि २० सेन्टिमिटर हुनुपर्छ ।
रामतोरियाबाट प्रोटिन, कार्बाेहाइड्रेट, भिटामिन ए, सी तथा बी २ प्राप्त हुन्छ ।
रामतोरियाको बियाँलाई सुकाएर रोस्ट गरी पिसेर कफीको विकल्पमा रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो चलन विभिन्न देशमा छ ।
भान्टा वर्षभरि सजिलै फलाउन सकिने तरकारी हो । भान्टाको बिरुवालाई दुई तरिकाले उमार्न सकिन्छ । पहिलो भान्टाको बीउलाई जमिनभित्र राखेर ४० दिनसम्म पर्खने । बिरुवा उम्रिएपछि त्यसलाई अर्काे माटोमा रोपेर भान्टा फलाउन सकिन्छ । भान्टाको बिरुवाबीच ६० सेन्टिमिटरको दूरी कायम राख्नुपर्छ भने पहिले नै जमिनमा ६० सेन्टिमिटरको दूरी बनाई बीउ रोप्न सकिन्छ ।
भान्टामा भिटामिन ए, बी, सी, डी, क्याल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । भान्टा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक तरकारीमध्ये एक हो ।
भिटामिन सीले भरिपूर्ण भान्टाले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । रोगप्रतिरोधी प्रणाली कमजोर भएकाहरूका लागि भान्टा एकदमै फाइदाजनक छ ।
लौका घरमा फलाउन सबैभन्दा सजिलो तरकारीमध्ये एक हो । यद्यपि यसको लहरा फैलन भने प्रशस्त ठाउँ चाहिन्छ । लौकालाई लौराको सहायताले कौसीमा फैलन दिन सकिन्छ अथवा पातलो बाँसको छत तयार गर्न सकिन्छ । लौकाको बिरुवा उमार्न आधा मिटर माटो खनेर केही बीउ हाल्ने । आधा फिटको दूरीमा बीउ रोपेर त्यसमाथि माटो हाली छोप्ने । केही दिनभित्र स–साना बिरुवा देखा पर्न थाल्छन् ।
लौकाबाट प्रोटिन, कार्बाेहाइड्रेट, भिटामिन ए, फस्फोरस, क्याल्सियन, आइरन, म्याग्निसियम, जिंक आदि प्राप्त हुन्छ ।
लौकालाई ६ महिनासम्म राख्न सकिन्छ । नुनपानीमा डुबाएर राख्दा लौका ताजा रहन्छ ।
लौकाजस्तै करेला पनि लहरे तरकारी हो । यसको खेती खासगरी नदी वा खोलाको किनारमा राम्रो हुन्छ । घरको कौसी वा बारीमा पनि सजिलै करेला फलाउन सकिन्छ । यसलाई पनि बीउ राखेर वा बोट रोपेर हुर्काउन सकिन्छ ।
करेला भिटामिन ए, सी, काँपर, म्याग्निज, सेलोनियम, प्रोटिन आदि पोषण तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ ।
करेला स्वादमा तीतो भए पनि यो स्वास्थ्यका दृष्टिले भने निकै फाइदाजनक तरकारी हो । डायविटिज, मोटोपन, रक्तचाप, आँखाको कमजोरी आदि भएकाहरूलाई करेला उत्तम मानिन्छ ।
तरकारी बारीको निरीक्षण, गोडमेल हरेक हप्ता गर्ने । सुख्खा र अनावश्यक बिरुवा उखेलेर फाल्ने । यसो गर्दा तरकारी बढ्न पूरा पोषण मिल्छ ।
घरमा सजिलै फलाउन सकिने तरकारी
१३. हरियो खुर्सानी
१४. धनियाँ आदि ।
श्रावण २५, २०७३ - घरमा बिजातीय बुहारी भित्रिँदा
मंसिर २४, २०७२ - घरमा समयको बचत
कार्तिक १३, २०७२ - करेसाबारी